Umgcini wekhadi le-Ekster MagSafe: intle kwaye iyenzeka | IPhone iindaba
Isiphatho sekhadi le-Ekster MagSafe: isitayile kwaye siyasebenza
ULuis Padilla | 15/04/2021 20:00 | Izixhobo ze-IP, Ezahlukeneyo
Kwiminyaka yokuhlawulwa kwamakhadi, okanye nokuba uneselfowuni, kufuneka siphathe isipaji esinzima nesinamandla epokothweni yethu kuya kusiba nzima, kwaye enkosi kumgcini wekhadi le-Ekster MagSafe, into eyadlulayo.
Eli xesha lobhubhane liyakukhunjulwa ngamaxesha amaninzi amabi, kodwa kufuneka iqatshelwe into yokuba inezinto zayo ezilungileyo, ezinje ngokunyusa okukhulu okunike amakhadi kunye neentlawulo ezihambayo. Amashishini amaninzi ebekade engazamkeli ezi ntlobo zeentlawulo, ngoku azamkele ngaphandle kokuthandabuza, kwaye ukuba ngaphambi kokuhlawula isidlo sakusasa kunye nekhadi kunokubangela ukubukeka okubi, ngoku yeyona nto iqhelekileyo emhlabeni. Ngayo yonke le nto, kuya kusiba yimfuneko ukutsala isipaji sakho okanye isipaji sakho. Ndihlala ndiphethe ikhadi lam lokuzazisa, elisafuneka, kunye nekhadi letyala xa intlawulo ngeselula ingasebenzi, eyenzeka ngamanye amaxesha.
Ewe, esi sibambi sekhadi le-Ekster lisombulula ingxaki kum, kuba ndinokuphatha amakhadi amabini (nokuba mathathu, nangona exinene kakhulu ukuthanda kwam), kwaye uyiqhoboshele kwi-iPhone yam enkosi ngokuhambelana kwayo nenkqubo yeMagSafe, eyenza dibanisa umazibuthe kuyo. Le manyano ngoomazibuthe yomelele kakhulu, kwaye enkosi kulungiselelo lwayo umnini wekhadi elungelelana ngokugqibeleleyo ne-iPhone yam, ngaphandle kokuhamba. Ukuyisusa kunye nokubeka kuyo kulula, kodwa kwangaxeshanye Inika ukhuseleko kuba ayizukuwa ungakhange uyiqaphele okanye xa uyifaka epokothweni. Kwakhona kulula ukufaka nokususa amakhadi kwiindawo zawo ezifanelekileyo, sinomngxuma ngasemva ukususa elona khadi lingaphakathi, nangona ndingazange ndilidinge, lisebenza kakuhle ngaphandle kokulisebenzisa.
Umnini wekhadi lemagnethi wenziwe ngesikhumba esikumgangatho ophezulu kwaye ukugqitywa kwakhe kungaphezulu kokugqibeleleyo. Ukuchukumisa kwayo kumnandi kakhulu, kwaye kuya kudibana ngokugqibeleleyo nayo nayiphi na imeko ehambelana nayo, nangona ijongeka inomtsalane ngamatyala esikhumba. Kufuneka siyiqonde into yokuba ukuze ilungiswe ngomazibuthe ngelixa sisebenzisa ityala, kufuneka lihambelane neMagSafe. Singayisebenzisa ngokuthe ngqo nge-iPhone yethu, ngaphandle kwetyala, njengoko sikhetha. Ifumaneka kuphela ngombala omnyama.
Kwezi veki zimbini bendikade ndiyisebenzisa, ndiyifumene le khadi inemagneti ikhululekile kwaye iyasebenza, kuba ndilibele kwaphela ukuphatha isikhwama, esiya kuba ziindaba ezimnandi xa kufika imozulu entle kwaye silibale ngeebhatyi. Ukuphatha iselfowuni epokothweni yakho kuya kwanela, kwaye ukuba nangaliphi na ixesha ufuna ukuyisusa, njengaxa ushiya ifowuni kumntwana wakho, kuthatha umzuzwana nje ukwenjenjalo. Akuzange kube kanye ndiyilahlile kwi-iPhone yam xa ndiyifaka okanye ndiyikhupha epokothweni ngeli xesha lokuvavanywa, Into endenze ndarhanela ekuqaleni, kodwa endiqiniseke ngayo ngokupheleleyo ngolu vavanyo.
Umgcini wekhadi le-Ekster MagSafe lelona khetho lilungileyo kuthi abo bafuna ukushiya isipaji sethu ekhaya xa siphuma. Xa unendawo yokuthwala amakhadi amabini / amathathu, uqhagamshelo lwayo ngemagnethi lukhuselekile kakhulu, kwaye ukucekeceka okugqithisileyo kukwenza ungazi nokuba uyiphethe epokothweni. Yenziwe ngesikhumba seprimiyamu, ixabiso laso liphantsi kakhulu kunendlela esinikwa yiApple, kwaye icolile. Sifumaneka kwiwebhusayithi ye-Ekster nge $ 31,20 (unxibelelwano) ekufuneka songeze kuyo $ 13 yeendleko zokuhambisa. Ngaphandle kwezi ndleko, isabiza kakhulu kuneye-Apple.
Umnini wekhadi leMagSafe
Ithunyelwe nge: 15 April 2021
Utshintsho lokugqibela: 15 April 2021
Sleek kunye ne-ultra slim
Isithuba samakhadi ama-2-3
Isibophelelo esomeleleyo semagnethi
Ifumaneka kuphela emnyama
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Izixhobo ze-IP » Isiphatho sekhadi le-Ekster MagSafe: isitayile kwaye siyasebenza
I-WhatsApp ihlaziywa ngohlaziyo kumfanekiso kunye nevidiyo yokujonga kwangaphambili
Kubonakala ngathi iPensile yesi-3 iya kufika nge-20 ka-Epreli